Nezvedu - Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd.
Forsetra Roof Tile Co, Ltd yakagadzwa muna 2017, ichitarisa kugadzirwa kwematombo akafukidzwa simbi matiles mataira, asphalt shingles uye PVC / ALUMINUM gutter yekunaya. Isu zvakare tinogadzira yakakwirira-zinc-yemukati yesimbi truss yemwenje-kurema-simbi ifuremu dhizaini dzimba. Nezvese izvi zvinyorwa zveimba zvakavakwa zvakavakirwa, tinorova kupa vatengi vedu ne one-kumira-kunotenga masevhisi.
Tine maviri epamberi kugadzira mitsara yematombo akafukidzwa padenga mataira ehurudzi imwechete uye imwe yakavhengana yeiyo, ine yakazara seti accessories, yakadai seye ridge cap, mupata tray, barge uye flat sheet etc. Zvakare, isu tine ese tanhatu akakurumbira magadzirirwo padenga tile mbiri uye akasiyana mavara evatengi kusarudza, kuitira kuti isangane nezvose zvinodiwa nevatengi. Zvichakadaro, isu tinogamuchirawo kugadzirwa kwezvakagadziriswa zvikamu zvevaya vatengi vanoda kutaridzika kweimwe denga kana rakasiyana geji yechigadzirwa.
Forsetra Roof Tile Co.Ltd haingotarise chete kugadzirwa kwematare tiles, asiwo inogadzira PVC / ALUMINUM mvura gutter system chigadzirwa, kuitira kupa vatengi neye-kumira kutenga. Yedu Asphalt shingle sechimwe chigadzirwa chatinogadzira, kuwedzera imwe sarudzo kune vatengi kunyanya vanobva kuSoutheast Asia uye nyika dzekuSouth America, uko maruva eAsphalt ane ruvara anonyanya kufarira kushandisa.
FORSETRA inotenda kuti kuvaka imba yakasimba uye yakanaka yevatengi kwakakosha sekuvaka mbiri yeiyo yepamusoro-mhando-chigadzirwa kwatiri. Naizvozvo, isu tinopa kwakanakisa kwese kwese rudzi rwezvigadzirwa zvekubikwa kwese kuChina uye tinoda kubhadhara mutengo wepamusoro uye kutariswa kuitira kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chedu chinogutsa vatengi vedu chinodiwa. Isu tinovavarira kupa vanogadzira, makambani anovaka, vatengesi vese uye nevaridzi vedzimba vane yepamusoro matarenda mataira izvo zvinofadza maziso uye zvakagadzirirwa kumira zvinhu.